FAHANTRAN’NY MALAGASY : Natsikafon’ny Mompera Pedro ny lainga marivo tototry ny Filoha malagasy
Voakiana mafy ny fitondram-panjakana. Voavaly avy hatrany ny lainga marivo tototra nataon’ny Filoham-pirenena manoloana ny zava-misy iainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao. 11 juillet 2017
Nivahiny tao amin’ny fahitalavitra frantsay iray i Mompera Pedro nandritra ny fandalovany tany Frantsa, ny herinandro lasa teo iny. Nisongadina nandritra ny resaka nataony fa “tena mahantra fadiranovana ny vahoaka malagasy ary miaina ao anaty fahantrana lalina”. Miharihary eran’izay tontolo izao ny fahantrana misy eto Madagasikara na miezaka mafy ny manafina izany aza ny mpitondra. Vao tsy ela ihany koa no nivahiny tamin’ny haino aman-jery frantsay ny Filoham-pirenena ary miezaka manakona hatrany ny fiainana marina iainan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao
Nandritra ny valan-dresaka nataon’ny mompera Pedro kosa anefa dia ny mifanohitra tanteraka tamin’izay no navoitrany satria voatsikafona tao avokoa ny zava-misy eto an-toerana ankehitriny. Nanaporofo izany fahantrana lalina izany ny sary noentina nandrakofana ilay fanadihadiana sy ny resadresaka natao.
Anisany tena nisongadina tao anatin’izany ny fahatsapany fa “efa tena latsaka ao anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy ary tsy miraharaha ny vahoaka malagasy mihitsy ny mpitondra” manoloana ny fahantrana mihoampampana mianjady amin’izy ireo. Ity mompera miahy sy mitaiza ireo zaza kamboty sy fianakaviana sahirana eny Andralanitra ity dia nanamafy hatrany ny fahavononany amin’ny asa makadiry izay hataony eto Madagasikara. “Vonona aho ny hiady hatrany ho an’ny vahoaka malagasy”, hoy ny fanambaràna nataony.
Efa nandritra ny 47 taona izay no niasa sy monina teto Madagakasikara i Mompera Pedro ary nandray an-tanana manokana ireo mahantra sy kamboty tsy mahita aleha intsony.
Mifanindran-dalana amin’izay firifiry ateraky ny fahantrana izay indrindra dia miantso vonjy mafy ary miangavy an’ny mpitondra ireo mponina etsy La Réunion kely ny mba hijerena ny fiainan’izy ireo manokana.